Tokony hampiasa vola amin'ny fanaraha-maso ny tsikera an-tserasera hitantanana ny laza ve ianao? | Martech Zone
Amazon, Lisitr'i Angie, Trustpilot, TripAdvisor, Yelp, Google Business, Yahoo! Lisitra eo an-toerana, Choice, G2 Vahoaka, TrustRadius, TestFreaks, Inona avy moa?, Salesforce AppExchange, Glassdoor, Naoty na fanamarihana Facebook, Twitter, ary na ny tranonkalanao manokana aza dia toerana rehetra hisamborana sy hamoahana hevitra. Na orinasa B2C na B2B ianao… mety hisy olona hanoratra momba anao amin'ny Internet. Ary misy fiatraikany ireo tsikera an-tserasera ireo.
Inona ny fitantanana laza?
Ny fitantanana laza dia ny fizotry ny fanaraha-maso sy fitantanana ny lazan'ny olona iray na orinasa an-tserasera. Tany am-boalohany fe-potoana fifandraisam-bahoaka, ny fandrosoan'ny valin'ny fikarohana biolojika, ny tambajotra sosialy, ary ny tranonkala fanaraha-maso ampahibemaso dia nahatonga ny fitantanana laza ho fitsikerana ny ezaky ny varotra sy ny varotra orinasa iray.
Serivisy fanaraha-maso laza matetika manaitra orinasa amin'ny fotoana tena izy rehefa misy fanamarihana tsy dia tsara atolotra amin'ny Internet. Raha mailo sy mamaly araka ny tokony izy ny orinasa dia afaka miasa mba hamahana ny disadisa alohan'ny fizarana azy ary vao mainka manimba. Toy izany koa, ny orinasa dia afaka mandray soa amin'ny famahana ny fifanolanana mba hahafahan'ny mpanjifa mahita ny valiny tsara fikarakaran'ny orinasa iray hanome ny mpanjifany.
Antontan'isa manan-danja momba ny hevitra amin'ny Internet
71% amin'ireo mpanjifa no manaiky ny hevitra an-tserasera dia mahazo aina amin'ny fanapahan-kevitry ny fividianana.
Ny 83% amin'ireo namaly dia nilaza fa hatoky ny famerenan'ny mpampiasa noho ny mpitsikera izy ireo.
70% amin'ireo mpanjifa no mijery hevitra na naoty alohan'ny fividianana.
Ny fanadihadian'ny mpanjifa dia miteraka fiakaran'ny vokatra 74%.
Ny fanamarihana dia mitazona ny tsy fivadihana 18% ambony kokoa ary ny fahafaham-po amin'ny fividianana 21% ambony.
Tsy tsara daholo anefa. Tombanana ho 10-15% raha toa ka sandoka daholo ny hevitra amin'ny haino aman-jery sosialy. Ny fanadihadihana sandoka dia nahasarika ny sain'ny mpaninjara governemanta sy ny Internet. Amazon dia mitory serivisy famerenana vokatra sandoka arivo mahery.
Tombontsoa ho an'ny Amazon indrindra. Ny fiheverana sandoka amin'ny Amazon dia tsy voatery handratra ny mpamokatra vokatra, fa tena mandratra ny marika Amazon ihany koa izy ireo ary mandany vola satria ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa tsy mahomby dia mety hitarika fiverenana avo kokoa. Mandrara ny fandinihana sandoka ny fepetra fampiasan'i Amazon, ary mitaky ny fanitsakitsahana ny fifanarahana sy ny fandikana ny lalàna fiarovana ny mpanjifa izy io.
PeopleClaim.com manolotra ny mpanjifa sy ny orinasa fotoana ahafahana mandefa fitakiana ary ampahafantarina fotsiny izany rehefa tsy mamaly ilay mpandray na mitady ny hamaha ilay toe-javatra. Tsy mila mpisolovava na fanelanelanana ilaina. Nanolotra an'ity sary ity izy ireo, Ny famerenana ny hevitra.
Ka… ny valiny tanteraka! Tokony hanara-maso ny olonao, ny orinasanao ary ny vokatrao miaraka amina sehatra fanaraha-maso laza ianao mba hahazoana antoka fa afaka mamaly sy mitazona laza tsara eo amin'ny Internet ianao.
Tags: AmazonLisitr'i Angiehevitra momba ny orinasaChoiceCustomer reviewsNaoty na fanamarihana Facebookg2 vahoakaGlassdoorgoogle ny orinasakoFanamarihana an-tseraserapeopleclaimfitantanana lazafanaraha-maso ny fanaraha-masohevitrampivarotra appexchangeTestFreaksTripAdvisortrustpilottrustradiusTwitterInona avy moa?Yahoo! Lisitra eo an-toeranaYelp